ဖိၪခွၫလၩ့မါ. | Radio Veritas Asia
ၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ႇ ဒဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪထီးအလူၬနီၪႇ ဘဲၫၥိၭအမိနါဂၧၫ့ဘၪဆၧတၭႇ ၥုၭဘူၭအၥၭလၧအအီၪလီၫ.- ၦဖၫရစံၫႇ ဒဲၦကွ့ၭလံၬၥံၪၥူၭဝံၥူၭလၩဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫ ၦလဂၩယီၩ ထိးဆၧၫ့ၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪႇ ဒဲအၪ့ဎုၬဆၧလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭလီၫ. အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဆၧလမံၩ့ယီၩႇ စံၭဝ့ၫႇ
ၦလၧနၥံၪအကျၩ လၧအအီၪလၧအၥိၪလယၩနီၪ အ့ၪလၩ့မါလဒုၩတၭႇ လအီၪက့ၪလၩ့ထးဘၪဝ့ၫ ခွံၫဆံၫခွံၫဒုၩ လၧမံၩ့လၬကျၩတၭႇ လလ့ၩအၪ့ဎၬဘၪလၧအလၩ့မါလဒုၩ ထီးအဒၪန့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪႇ မွဲပလၫလဂၩလဲၪ.-
တၭအဝ့ၫဒၪစံၭ ၦလဂၩအဖိၪခွၫအီၪနံၫဂၩလီၫ. အဖိၪခွၫဒၪဘၨၩလဂၩ လ့ၩလၧအဖါအအီၪတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ဖါဧ့ႇ ဆၧဖိၪဆၧလံၩလၧနမိဖ့ၪၥၫလဖၪနီၪ အၪ့နၩ့ဖၭအဆၧၫ့တၭႇ ဖ့ၪလၫ့ယၧၩဘီၪ. အဝ့ၫနီၪအၪ့နၩ့ဖၭအဆၧဖိၪဆၧလံၩတၭႇ ဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ.-
လအၪနံၩအၪၥၫ့ဘၪတၭႇ အဖိၪခွၫဒၪဘၨၩ အီၪက့ၪကီၪ့န့အစူၪလးအခၪ့ခိၪ ထီးအလူၬတၭႇ လ့ၩဝ့ၫထီၩ့လၧ ထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့လီၫ. အၪ့ဂီၩ့ခွံၬအစူၪလးအခၪ့ခိၪ ထီးနီၪလၧဆၧလၨၪဖၬအဖၧၩ့လီၫ.- အၪ့ဂီၩ့ကယဲအဆၧ ထီးအလူၬနီၪႇ ဆၧၥၭဝံလၩ့ဒိၩဖၭဒိၪ အီၪထၪ့လၧခးလဘံၪ့နီၪအဖၧၩ့တၭႇ အဝ့ၫဘၪၡၪ့ဘၪယၬဝ့ၫဒၪလီၫ.-
လ့ၩအီၪဝ့ၫလၧၦခးဖိၪလဂၩအၥိၭတၭႇ အဝ့ၫဒၪအၪ့မၧၫ့အလ့ၩယိထိၭလဖၪ လၧမံၩ့လၬကျၩလီၫ. ဆၧမိအၪ့ဘၪအၥၭလၧ ၥံၪ့ကၩရိၬအၥၪလၧထိၭအၪ့ဝ့ၫနီၪႇ ဆၧဖ့ၪဒုၭအၪ့ဘၪနးဂၩအ့ၬ. အဝ့ၫဒၪနၪ့လၩ့ထဲၩ့အၥၭတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ယဖါအဎီးအၡၩဒိၭအၪ့လံၩ့အၥၭ လၧအအၪ့ကုၭအီၩဎွ့ၩလဖၪ အီၪဎွ့ဂၩဎွ့ဂၩလဲၪနီၪး ယဝ့ၫဒၪယီၩယအီၪဝံအီၪဆံၩ့တၭႇ ယမိၥံၫမၬထီးယီၩလီၫ.-
ယမိဂဲထုၪ့ထဲၩ့ထဲၩ့လၧယဖါအအီၪတၭႇ ယမိလီၩဘၪအဝ့ၫႇ ဖါဧ့ႇ ယမၩမၪဘၪယူၭမူၭခိၪယူၭ. ယမၩမၪဆၧလၧနမ့ၬယၫယူၭ.- ၦကိၭယၧၩလၧနဖိၪခွၫနီၪ ယကြၨၭလၧၩ့အ့ၬႇ အီၪက့ၪယၧၩဘဲၫ နဎီးနၡၩဒိၭအၪ့လံၩ့အၥၭလဂၩအၥိၭဘီၪ.
အဝ့ၫဒၪဂဲထုၪ့ထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫ လၧအဖါအအီၪတၭႇ အီၪဒံၭဆီၩ့ဆုၩယဲၩ့ယိၬနီၪႇ အဖါဒၪဘၪယၫ့ၥၭဝ့ၫတၭႇ လ့ၩစဲၪ့တလဲး ဖိၭဝ့ၫအခိၬ ဒဲအဲၪဂါဝ့ၫလီၫ.- တၭအဖိၪခွၫ စံၭအဝ့ၫႇ ဖါဧ့ႇ ယမၩမၪဘၪယူၭမူၭခိၪယူၭႇ ဒဲယမၩမၪဆၧလၧနမ့ၬယၫယူၭႇ ၦကိၭယၧၩလၧနဖိၪခွၫကြၨၭလၧၩ့အ့ၬ.-
တၭအဖါစံၭအဎီးအၡၩႇ ဂဲၫဆိၬ စိၩဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭလၧအဂ့ၩထုၬနီၪႇ ဒုၭကီၩ့ဒုၭၥိၭအဝ့ၫဆံၭ. ဖ့ၪလၫ့စူၪၥံၭလၧအစူၪအဂးႇ ဒဲခၪ့ဖံၭလၧအခၪ့အဂးဘီၪ.- ချီဖိၪလၧအဘီၪနီၪ ဂဲၫဆိၬမၩၥံၫဘီၪ. အၪ့ဆၧတၭမုၬလၩၡီၩ့ဘီၪ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယဖိၪခွၫ လၧအၥံၫယူၭလဂၩယီၩႇ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဒီၭဝ့ၫတၭႇ လၩ့မါဝ့ၫနီၪ ဆၧဒၪန့ထဲၩ့ဒီၭအဝ့ၫယူၭ. အဝ့ၫၥံၪမုၬလၩဝ့ၫလီၫ.
အဖိၪခွၫဝဲၡါလဂၩ အီၪလၧဆံၬဖၧၩ့နီၪႇ ဂဲၫထဲၩ့ဘူၭလၧဂံၪ့တၭႇ နါဂၧၫ့ဆၧဖိၬဒိၩ့ႇ အူၪပံၩႇ ဒဲဆၧဂဲထုၪ့လံနီၪႇ- ကိၭန့ဆၧအဎီးအၡၩလဂၩတၭႇ အၪ့စၪ့ဝ့ၫႇ ဆၧယီၩမွဲဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ.- အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫႇ နဖုဂဲၫထဲၩ့ထီၩ့ယူၭ. နဖါမၩၥံၫယူၭချီဖိၪလၧအဘီၪယူၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲအန့ထဲၩ့အဝ့ၫဒၪ လၧအအီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့ဝ့ၫလီၫ.-
အဝ့ၫဒၪအၥၭထၪ့တၭႇ လ့ၩနုၬဝ့ၫအ့ၬ. အဖါဂဲၫစဲၪ့လၩ့တၭႇ အၪ့ယၫဝ့ၫလီၫ.- အဝ့ၫနီၪချဲၩ့ဆၧၫ့ ဆၧတၭႇ စံၭအဖါႇ ယိခွါႇ ယမၩနဆၧအၪနံၪ့အၪလၩယူၭ. နဆၧမၪလူၬနီၪႇ ယလၨၪခၫ့ဖၬနးဆိၭအ့ၬ. ဘဲၫၥိၭယမိမုၬလၩဆၧ လၧယထံၩယၥိၭနီၪး န့ၫဘ့ၪဖိၪလဒုၩနီၪႇ နဖ့ၪလၫ့ယၧၩနးဆိၭအ့ၬ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩႇ ထီးနဖိၪခွၫလၧအအၪ့ဂီၩ့နစူၪလးနခၪ့ခိၪႇ လၧၦမဲၩဎွဲၩမုၪအကျၩလဂၩယီၩ ဂဲၫထဲၩ့တၭ နမၩၥံၫချီဖိၪအဘီၪ့လၧအဂးမၬကၨ.-
အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫႇ ဖိၪခွၫဧ့ႇ နအီၪလၧယၥိၭလထံၪဎးတၭႇ ယစူၪလးယခၪ့ခိၪ မွဲနဆၧထီးအလူၬလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩႇ နဖုလၧအၥံၫယူၭလဂၩနီၪႇ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဒီၭဝ့ၫတၭႇ လၩ့မါဝ့ၫနီၪႇ ဆၧဒၪန့ထဲၩ့ဒီၭဝ့ၫယူၭ. အခိးမွဲကြၨၭလၧပၥၭထိၬ ဒဲမုၬလၩပဝ့ၫဆ့လီၫ.